Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Tsy afaka misidina ny fiaramanidina elektrika sy ny bolondava
Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Vaovao isan-karazany
Fiaramanidina elektrika - toy ny boulbees?
Nandritra ny am-polony taona maro dia nanaporofo ireo teolojika fa tsy afaka manidina ny bumbbees ary sosotra mafy izy ireo satria nanohy nanidina ihany - tamin'ny fampiasana fampitahana samy hafa. Toy izany koa ny zava-mitranga amin'ny fiaramanidina bateria-elatra maharitra. Heverina fa tsy ho vita izany, saingy zato mahery no miakatra manodidina ny 1000 eo ho eo.
Kely ireo ka tsy mila fitsipiky ny sidina akory.
Manaraka ny fomba fiasa Tesla fotsiny izy ireo miaraka amin'ny fiara etsy ambany.
Tao amin'ny tatitra nataon'ny IDTechEx, "Manned Electric Aircraft: Smart City sy Regional 2021-2041," ireo fiaramanidina elatra raikitra ary koa ny famakafakana ireo drafitra fiaramanidina vaovao miorina sy miorina amin'ny fiaramanidina vaovao.
Matetika dia mihamaro ny fanatsarana kely. Fanatsarana roa 10% no mahazo tombony amin'ny 21% ary malalaka ny safidin'ny fanatsarana. Diso hevitra ny olona fa ny Tesla dia mahazo rakipeo avy amin'ny batery tsara kokoa, fa ny zava-dehibe mitovy amin'izany dia ny fampandehanana soa aman-tsara ny bateria hatrany amin'ny fetrany, manala ireo faritra an'arivony, ary ny antsipiriany hafa. Vao maika maniry kokoa aza ny elanelan-tany amin'ny fiaramanidina kely satria ny fiarovana dia singa fiarovana, noho izany ny aviators koa dia mitady 0.2 drag drag, manala kilometatra iray cabling, faritra an-jatony ary motera tsy mandeha amin'ny laoniny ary herinaratra mandeha amin'ny herinaratra.
Manoloana ny zava-misy, ny mpandeha fiaramanidina kely herinaratra dia mampitodika ny sainy ho lehibe kokoa izao fiaramanidina elektrika ary ny fiainganana mitsangana tsy azo tanterahina. Manana teboka vitsivitsy izy ireo, satria ao anatin'ny vanim-potoana adaladala isika ankehitriny izay misy tolo-kevitra tsy mitongilana maro manintona vola avy amin'ireo mpampiasa vola manidy maso izay manantena ny Tesla manaraka. Marina ny nilazan'ireo teolojika fa ny endrika iray miaraka amina thruster amin'ny tendron'ny elany tsirairay avy ary tsy misy eo anelanelany hitanjozotra avy eny amin'ny lanitra rehefa tsy nahomby izy io. Rariny raha mitandrina izy ireo fa amin'ny ampahany misy amin'izao fotoana izao dia maro ny VTOL maro an'isa no latsaka avy eny amin'ny lanitra afaka 60 minitra miala ny fiainganana - tsy misy glide ary tsy misy fametrahana parachute akory aza amin'io haavo io. Ny ekonomia fiaramanidina an'habakabaka an-tanàn-dehibe dia manontany tena amin'ny tatitra hoe, "Taxi-piaramanidina: Fandraisana fiaramanidina mitsivalana sy fiaramanidina fitaterana an-tanety 2021-2041."
Betsaka no mivezivezy amin'ny VTOL manana elatra raikitra, mba hahafahan'izy ireo manidina toy ny fiaramanidina mahazatra matetika, miaritra maharitra kokoa, ary amin'ny tranga sasany dia mirotsaka tampoka rehefa misy vonjy maika. Ohatra iray amin'izany ny startup UK Vertical Aerospace mitsinkafona amin'ny $ 2.2 miliara taorian'ny Virgin Atlantika sy American Airlines nametraka baiko ho an'ny 1,000 amin'ny VTOL manana elatra voafaritra - amina miliara maromaro na dia mbola tsy misy aza ny rivotra.
Ny helikoptera mifanohitra dia mahomby kokoa amin'ny sidina mitsangana nefa tsy misy tosika miverimberina sy fitoniana amin'ny rivotra. Manampy amin'ny fananganana tranobe avo izy ireo ary mandehandeha mandritra ny adiny iray. Tsy misy batterie VTOL mahavita an'izany: tsy maintsy miatrika tranga kely momba ny raharaha izy ireo.
Miverina amin'ny sidina mahazatra sy ny fiaramanidina misy elatra voafetra, misy ny kajy toy ny bumblebee izay mampitandrina fa tsy misy na dia iray amin'ireo drafitra 8- ka hatramin'ny seza efa nomanina ho an'ny 100-2026 azo alefa amin'ny 2030-2 aza. Mampiasa fitoviana diso izy ireo satria ny XNUMX dia mampiasa ny fitsipiky ny vokatry ny tany ary ny maro hafa dia mampiasa ny fitsipika vaovao an'ny DT naparitaka nizara, izay nahatafiditra elatra maro. Ny DT dia midika hoe famoahana flaps ary ampaham-po lehibe, habaka, vidin'ny fitaovana, sintomina, ary halavan'ny runway. Manohana an'io ny kajikajy NASA sy DLR. United Airlines dia mikasa ny handefa fiaramanidina elektrika amin'ny 2026.
Diso ihany koa ny naysayers satria tsy miraharaha ny fomba "kely fanampiana rehetra" ho an'ny fiaramanidina lehibe kokoa. Ohatra, ny fiaramanidina isam-paritra mandoto ankehitriny dia manana tariby 30 km ary tsy mahasarika ny tarika tariby fa ny teraka herinaratra dia toy ny Tesla. Ny elanelan'ny Tesla dia avy amin'ny freins regenerative ary ny mitovy amin'ny fiaramanidina dia ny propellers miverina amin'ny fidinana sy ny kodiarana miverina amin'ny fipetrahana. Eny tokoa, ny kodiarana mandeha amin'ny herinaratra dia afaka manao taxi-be fiaramanidina ary mahomby kokoa.
Andao isika handinika ohatra iray. Bye Aerospace dia manana baiko maherin'ny 720 - 250 tapitrisa dolara mahery, miaraka amin'ny fanombohana fanaterana - avy amin'ny sekoly manidina sy mpandraharaha fiaramanidina fiaramanidina ho an'ny fiaramanidina bateria misy seza 2 sy 4 azonao andramana anio. Vao tsy ela akory izay no nanambarana fiaramanidina bateria-mpandeha herinaratra 8 mpandeha amin'ny haavon'ny "fividianana ambany indrindra amin'ny tompony" mitovy amin'izany, fa ny elanelam-potoana 500 nm (feno) dia nambara fa miankina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Oxis Energy ho an'ny bateria vaovao. Nitsiky ny mpitsangatsangana rehefa tonga tampoka ny vavony. Na izany aza, ny LGChem goavambe dia eo amin'ny refy mitovy amin'ny famatsiana bateria mitovy amin'izany ary, toa an'i Tesla, dia tsy niantehitra tamin'ny bateria iray mihitsy i Bye. Ireo asa fanakorontanana rehetra dia ataon'izy ireo amin'ny fanatsarana kely rehetra. Ireto lafiny manaraka amin'ny famaritana ireto dia mampiharihary ny sasany amin'izany ary koa ireo endri-piarovana marobe ankoatry ny elakelany lava, ny rafitra autolanding vonjimaika ary ny parachute an'habakabaka.
Ity famolavolana eFlyer 800 ity dia vaovao hatrany amin'ny tendrony ka hatramin'ny rambony. Ny fahombiazan'ny aerodinamika dia avo roa heny noho ny fiaramanidina turboprop lova mahazatra mitovy habe aminy - ny fahombiazan'ny rafitra avo lenta amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny fahombiazan'ny maotera avo lenta miaraka amin'ny drag kely ambany, motera elektrika 2 mitaingina elatra miaraka amina paingotra môtô misy redundant ary fonosana batterie quad-redundant. Ny fiakarana antonony kely dia kely azo avy amin'ny sela mpamokatra herinaratra fanampiny (angamba ny naorin'ny satelita izay nisedra azy ireo - mamokatra herinaratra indroa amin'ny fiara sy fiaramanidina masoandro ankehitriny) sy ny taxi-by herinaratra mandeha amin'ny kodiarana.
Jet It, ary JetClub, orinasa rahavavy tompon-tany ao Amerika Avaratra sy Eoropa tsirairay avy, dia nanao sonia fifanarahana mividy miliara dolara amina fiaramanidina fiaramanidina eFlyer 800. Ho fanampin'izany, ny L3Harris Technologies sy i Bye Aerospace dia nanao sonia fifanarahana hamolavolana karazana herinaratra sy misiônera marobe izay hanome ny fahaiza-manao, ny fanaraha-maso ary ny fahaizan'ny reconnaissance (ISR).
Amin'izao fotoana izao, Bye Aerospace dia tsy manao bumblebee miaraka amina fitsipiky ny sidina vaovao, fa afaka manampy propulsion zaraina amin'ny fotoana safidiny. Mandritra izany fotoana izany, ny fiaramanidina elektrika bateria rehetra dia miakatra haingana kokoa noho ny mandoto ny propeller toy ny Teslas haingana kokoa. Mitandrema fotsiny amin'ny filazanao fa tsy misy orinasan-herinaratra bateria - na fiaramanidina isam-paritra afaka misidina. Misy bumblebee mitsiky anao avy any ambony.